Matongerwo eNyika, 23 Kurume 2017
China 23 Kurume 2017
Kurume 23, 2017
Machechi Okurudzira Vanhu Kuvhotera Vatungamiri Vanotya Mwari
Mutungamiri weDivine Destiny Network, Bishop Ancellimo Magaya, vati vechitendero chechikristu munyika vakawanda zvikuru zvekuti vane masimba ekuunza hutungamiri hwunosimudzira hupenyu hweruzhinji.
VaMnangagwa Vokurudzira Mapositori Kunamatira VaMugabe Kuti Vatonge Kusvika Vafa
Mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vakurudzira mapositori pamwe neruzhinji rwenyika kuti vanamatire mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, kuitira kuti vatonge nyika kudzamara vafa.
VaMwonzora naVaMangwana Votatsurana neNyaya yeMitemo yeSarudzo
Zimbabwe yakatarisana nedzimwe sarudzo muna 2018 asi sechave chigariro musoro kushaya nyanga patotanga kukandiranwa makobvu nematete pakati pebato riri kutonga reZanu-PF nemamwe mapato anopikisa.
Vakarwa Hondo Vokurudzira Veruzhinji Kuvhotera Mutungamiri Wavanoda
Vakarwa hondo yerusununguko vari pasi pesangano reZimbabwe Liberation War veterans Association, ZLWVA, vasangana muHarare pavazeya mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi pamwe nezvematongerwo enyika
Kurume 22, 2017
Madzimai Opandukirana Zvakare muZanu PF "Muzita raAmai Mugabe"
Vaviri ava vanonzi vakatuka mudzimai wemutungamiri wenyika, Amai Grace Mugabe, pamusangano wehutungamiri hwemadzimai wakaitirwa kuMazowe.
Zimbabwe Yotaurawo paMusangano Uri Kuzeya Minda neHurombo Pasi Rose
Vachitaura pamusangano uyu, VaTakunda Chabata, vapa muonero wavo nezvingashandiswa pakuchengetedzwa kwevhu zvakaita semichina yemazuva ano senzira yekuchengetedza ruzivo munyaya dzevhu nevari kurishandisa.
Kuroodzwa kweVanasikana Vasati Vabva Zera Kwozeya kuNew York
Zimbabwe iri kutarisirwa kuzeya zvine hudzamu kumusangano wevanhukadzi mu New York dambudziko rekurodzwa kwevanasikana vasati vabva zera iro rinonzi riri kuramba richikwira munyika.
Mapato Anopikisa Ari muNera Anoti Zec Ngaivandudzwe
Vemapato anopikisa vaungana paFreedom Square muHarare vachiti komisheni inowona nezvekufambiswa kwesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission, ZEC, inofanira kuvandudza mashandiro ayo pamwe nemafambisirwo esarudzo munyika.
Amai Mugabe Vodzingazve Mhuri Dziri Papurazi reManzou Mvura Ichinaya
Mudzimai wemutungamiri wenyika, Amai Grace Mugabe, vari kupomerwa mhosva yekupwanya dzimba dzevanhu vari papurazi rinonzi arnold farm kana kuti manzou kuMazowe.
Kurume 21, 2017
Vasungwa Vari kuChikurubi Female Prison Voyaura neNzara
Vasungwa vechidzimai vari kuChikurubi Female Prison vanoti hutano hwavo huri panjodzi sezvo vasiri kuwana zvekudya zvinovaka muviri.
Amai Makarau Vanoramwa Kupinda Musangano Vachiti Vaneta neKunyombwa
Amai Makarau, avo vange vakatsamwa zvikuru, vaudza vamiriri vemapato aya, kuti semaonero avo, misangano yavanoita nemapato aya haisi kushanda nekuti nekudaro vachagara pasi seZEC voona kuti voita sei.
VaTsvangirai Vanoti ZEC Haifanire Kutora Divi paNyaya yeSarudzo
Mutungamiri weMDC, VaMorgan Tsvangirai, vakurudzira sachigaro weZimbabwe Electoral Commission, Justice Rita Makarau, kuti vasatore divi pagakava rinotyisa roitika munyika pakati peZanu-PF nemapato anopikisa nenyaya yemitemo yesarudzo.